Fanambarana manaitra nataon'ny Southwest Airlines Pilots Association: A hatramin'ny B soa aman-tsara na tsia mihitsy
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fanambarana manaitra nataon'ny Southwest Airlines Pilots Association: A hatramin'ny B soa aman-tsara na tsia mihitsy
Androany, Kapiteny Jon Weaks, filohan'ny fikambanan'ny mpanamory fiaramanidina Southwest Airlines, dia namoaka fifandraisana tamin'ireo mpanamory fiaramanidina efa ho 10,000 izay soloin'ny fikambanana. Tamin'ny serasera nomeny dia nanolotra tontolon-kevitra sy fomba fijery fanampiny momba ilay "State of Emergency Operational Emergency" nambaran'ny fiaramanidina izy. Tamin'ny fifandraisany dia nanamafy ny fiarovana ny zotram-piaramanidina ny kapiteny Weaks, ny fahatokisan'ny sendikan'ny mpanamory fiaramanidina AMFA hitazomana ny fiaramanidintsika ao anaty toetr'andro ary ny fanoloran-tena iraisan'ny SWAPA Pilots sy ny mekanika AMFA hiaro hatrany ny mpandeha. SWAPA Pilots dia tompon'andraikitra amin'ny sidina soa aman-tsara manomboka amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B na tsia mihitsy.
Ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanasongadina ny fahombiazan'ny fitantanana ambony ao amin'ny Southwest Airlines, ny fahitany ny fomba fiasan'ny mpiasa, ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana sy ny fampiharana ny asa ataontsika isan'andro, ary ny tokony ho fiahiahy ny olona rehetra ao amin'ny seranam-piaramanidina OUR.
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara ny State of Emergency Operational (SOE) i Southwest, andrana voasarona natao hampitahorana ireo mekanikantsika izay niteraka tahotra sy fiarovana tsy amin'antony amin'ireo mpandeha sy ny besinimaro manidina. Rehefa nahita ny atsimo andrefan'ny firenena nanameloka vondrona mpiasa iray nanambady ny fiarovana ny fiaramanidintsika noho ny olan'ny fikolokoloana, dia nihamafy ny fanontaniana sy ny ahiahy. Ny zava-nitranga taorian'io fanambarana io dia ny fampisehoana tsy nampoizina indrindra nataon'ny mpitantana ny foko sy ny scapegoot ny mpiasa ao amin'ny tantaran'ny orinasanay.
Ny Alakamisy 19 Febroary, Andriamatoa Van de Ven, Lehiben'ny Operating Officer (COO), dia nandefa fanavaozana eraky ny orinasa momba ny fiaramanidintsika ivelan'ny serivisy. Tao anatin'izany dia nanambara izy fa, "Tamin'ny 12 febroary, andro vitsivitsy taorian'ny fivorian'ny fifampiraharahana farany nataontsika tamin'ny AMFA, dia niaina fiaramanidina an'habakabaka ivelan'ny serivisy mbola tsy nisy toy izany tany amin'ny toerana fikojakojana efatra manokana izahay." Raha nanao izany izy dia tsy nitazona ny heviny fa ny isan'ny fiaramanidina tsy misy serivisy dia mifandray mivantana amin'ny fifampiraharahana, ary noho izany, ny AMFA dia nandratra ny orinasanay noho ny fifampiraharahana. Ny COO dia nahavita nanary ny mekanikanay tao ambanin'ny bus niaraka tamin'ny, "Mampalahelo fa manana tantaram-panakorontanana asa ny AMFA, ary i Southwest dia misy fitoriana roa miatrika fanoherana ny firaisambe," na dia tsy misy porofo momba ny "fikorontanan'ny asa" hafa noho ny isan'ny fiaramanidina mivoaka ny fanompoana. Araka ny fitenenana, ny fifandraisan-davitra dia tsy antony.
Inona no nafoin'i Andriamatoa Van de Ven? Tsy nahavita nanonona izy fa ny toerana tsirairay noresahiny dia manao fikojakojana maharitra "mavesatra" ary manelanelana noho ny ankamaroan'ny toerana hafa. Marina izany, marina ihany koa ho an'i Dallas, izay nanambarana SOE hafa koa tamin'ny herinandro lasa teo. Tsy niresaka ihany koa izy fa maro amin'ireo fanemorana MEL sy fanamarinana fikolokoloana izay nahemotra no mety ho tonga ao anatin'ny fotoana voafehy. Ho fanampin'izany, tsy nahomby izy tamin'ny kaonty momba ny hetsika fikojakojana mifandraika amin'ny toetrandro izay nateraky ny tafiotra ririnina maro tato ho ato ary ny fitomboan'ny indents sy ny lavaka ao amin'ny fitoeran'ny entana (isaky ny AMFA).
AMFA dia nanome ohatra vitsivitsy hafa izay nesorina tamim-pahibemaso tao amin'ny taratasin'Andriamatoa Van de Ven. Herinandro monja talohan'ny SOE dia nisy olana iray mahomby amin'ny fiaramanidina 22 momba ny peratra O ho an'ny sivana lasantsy maotera izay nahatonga ireo fiaramanidina ireo ho tsy miasa. Ary satria ny MAX dia fiaramanidina vaovao kokoa, dia sarotra indraindray ny mahazo ny fitaovana ilaina na ampahany fanampiny ilaina hitazomana ny seranam-piaramanidina.
Ny AMFA dia nazoto nilaza ny tsy fananana ampahany ampy an-tanana, ary indraindray tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny mampiasa ara-dalàna na ny "manendaka" ny ampahany amin'ny fiaramanidina hafa mba hahafahana mamaly ny fitakian'ny asa. Ny tokony ho miharihary amin'ny fitantanana ambony dia ny tsy fahampian'ny tahiry ampy, ny fianteherana amin'ny ampahany indram-bola amin'ny fiaramanidina hafa, ary ny banky amin'ny fitehirizam-bokin'ny fotoana tsy voavonjy, fa ny fanitarana fotsiny, ny fanemorana.
Ny fanavaozana an'Andriamatoa Van de Ven dia narahina taratasy ny harivan'ny 22 febroary lasa teo avy amin'ny Lehiben'ny mpanolotsaina ara-dalàna atsimo andrefana, Andriamatoa Mark Shaw, ho an'ny mpitarika AMFA niampanga ny “hetsika iraisana tsy ara-dalàna” nataon'ny mekanika. Andriamatoa Shaw dia tsy mitanisa porofo momba ity hetsika heverina fa tsy ara-dalàna ity. Ny "zava-misy" tokana nananany dia ny "fandinihany angon-drakitra manamarina fa ny fikojakojana voajanahary na zava-nitranga hafa dia tsy afaka mamokatra statistika an'arivony tsy misy fandaharana (UAD) avo indrindra mandritra ny herinandro lasa izay." Ny zavatra banga tsy hita maso amin'ny fiampangana an'Andriamatoa Shaw dia ny tsy filazan'ny orinasa fa nisy ny fanoratana an-tsoratra tsy marina, diso, na noforonina. Sanatria. Tsy isalasalana fa ny loharanon-karena IT natokana hanangonana sy hanangonana ny fandinihan-dRamatoa Shaw dia tsy voan'ny tsy fahampiana IT manerantany mandritra ny andro sisa iasanay, ao anatin'izany ireo olana IT izay nanidy ny fivezivezena Southwest Flight mandritra ny adiny efatra ny marainan'ny 22 Febroary.
Andriamatoa Shaw dia miteny amin'ny lafiny roa amin'ny vavany. Nambarany fa “ny filaminana no zava-dehibe indrindra any amin'ny faritra Andrefana Andrefana ary manaja tanteraka ny zon'ireo mekanika tsirairay izahay hamantatra ireo olana ara-piarovana ara-dalàna.” Saingy izy? Etsy andaniny, ny fitantanana dia maniry ny hiasan'ny mekanikantsika ny antso tsara, fa etsy ankilany, tezitra izy ireo satria manandrana manao ny tsara ny mekanikantsika mandritra ny mikraoskaopy ataon'ny FAA. Ny tsy fitovizan-tsaina dia mandrenitra!
Ny orinasa dia misoroka ny zava-misy manjavozavo fa ny Southwest dia mbola eo ambany fanaraha-maso FAA sy DOT miaraka amina fanadihadiana marobe mitohy ao anatin'izany ny Performance Weight and Balance (PWB), ny olana amin'ny fiofanana, Flight # 1380, Flight # 3472, ny FAA's Certificate Management Office (CMO) ho an'ny Southwest nohadihadian'ny Inspecteur général an'ny DOT, sns. Tao anatin'ny tatitry ny fanadihadiana nataon'ny FAA tamin'ny 2017, izay ampahibemaso ankehitriny, hoy ny FAA: "Toa tsy misy ny tontolon'ny fahatokisana, ny fifandraisana mahomby ary ny fahavononan'ireo mpiasa hizara lesoka, ahiahy na tsy fahombiazana tsy misy tahotra fandrahonana na valifaty. Ity farany dia mitarika any amin'ny ambaratonga avo lenta amin'ny fiarovana izay ezahan'ny rafitra fitantanana fiarovana (SMS) hitazona amin'ny avo indrindra azo atao. ” Afaka mahita rohy mankany amin'ny fampahalalana amin'ny sasany amin'ireto fitaovana ireto ianao Eto, Eto, ary Eto. Na izany aza, miaraka amin'ireo anton-javatra rehetra eo amin'ny asa fikojakojana anay ireo, ny fahaiza-mitarika eo amin'ny sehatry ny SWA dia nahatsapa fa tokony hanome tsiny tsotra izao ny olantsika momba ny mekanika recalcitrant lasa mirongatra.
Hitanay ny fahaiza-mitarika mahantra voalohany eo amin'ny fifandraisana mifanipaka eo amin'ny COO sy ny CEO. Raha sahirana nanipy ny mekanikanay tao ambanin'ny bus Andriamatoa Van de Ven noho ny tsy fahombiazan'ny Orinasa, tamin'ny 22 febroary, Andriamatoa Kelly dia sahirana nidera azy ireo. Tao anatin'ny fanavaozana ho an'ny mpiasa dia nanoratra izy hoe: “Miavaka ny mekanika. Mirehareha amin'izy ireo aho, ary tena mahery fo izy ireo tamin'ny famerenana ny seranam-piaramanidina nandritra ny tapa-bolana lasa izay. Mendrika ny fisaorana rehetra izy ireo. ” Iza amin'izy io? Ny mekanikanay dia tsy afaka mirotsaka an-tsehatra amin'ny asa asa tsy ara-dalàna ary sady miverina am-pieritreretana ny fiaramanidina nandritra ny tapa-bolana lasa izay. Fanambarana iray mazava ho azy fa novokarina sy nanompo tena. Iza amin'ireo? Ny fitarihana toksika dia teny izay niditra tao amin'ny leksikon'orinasa sivily avy amin'ny tafika, ary ohatra amin'izany no ataon'ny mpitondra amin'ny mekanika fiaramanidintsika. Tsy vaovao amin'ny fitantanana anay ny teny hoe "misy poizina". Tadidio io fe-potoana io sy ny sidina # 1380, satria mbola hanana an'io tantara io amin'ny fotoana hafa aho.
Raha mijery ny tsy fitovian-kevitra ara-tsaina sy ny fifandraisana mifanipaka avy amin'ny CEO sy COO, inona no hafatra tokana azo foronina sy mahalefaka tena? Ny valiny dia mitoetra amin'ny fotoana. Ny fitantanana Southwest dia tonga tao amin'ny AMFA vao haingana niaraka tamin'ny tolotra nataon'ny orinasa taorian'ny tsy nahombiazan'ny TA. Tao anatin'ny hetsika mahavariana sy mitantara, nangataka ny outsourcing carte blanche ny fikojakojana ny tobin'ny fanamboarana vahiny. Tsy nisy fetrany ny habetsany, ny toerana na ny pitsipitsony rehetra. Fanambarana fotsiny momba ny faniriana hivoaka amin'ny faritra sasany amin'ny toerana sasany amin'ny ho avy. Ny fitantanana SWA dia nilaza fa maniry ny hifaninana ny mpivarotra hiasa amin'ny fiaramanidina misy antsika. Na izany aza, amin'ny maha mpitatitra an-trano lehibe indrindra eto amin'ny firenena azy dia efa manana ny fahaizana mitaona ny fifaninanana lehibe ny zotram-piaramanidina. Ahoana no fomba nampitana an'ity outsourcing marobe ity? Ny Tale jeneralinay dia nanoratra memo ho an'ireo mpiasa miresaka momba ny “fanovana kely ny lalàna kely” notadiavin'ny fitantanana amin'ny fifanarahana AMFA. Aza manao hadisoana, ny fitantanana "fanovana fitsipika kely" dia ny outsourcing tsy misy fetra ary azonao atao ny maminavina ny dikan'izany amin'ny isan'ny mekanika manao fanamiana Atsimo Andrefana. Ny tena ratsy indrindra dia natsangana indray ity olana ity rehefa vita ny fifanarahana momba io lohahevitra io tamin'ny fifampiraharahana teo aloha.
Ny fivoarana tahaka an'ity dia mety tsy hihetsika amin'ireo mpanamory fiaramanidina mandra-pahatongantsika mandanjalanja ny toe-javatra. Androany, ny Southwest Airlines dia mamoaka ny 80 isanjaton'ny fikolokoloana ny fiaramanidina rehetra.
Novakianao tsara izany - ny 80 cents isaky ny dolara laninay amin'ny fitazonana sy fanamboarana ny fiaramanidintsika dia ampidirina ivelany. Ka ahoana no mampitaha ny outsourcing antsika amin'ny an'ny fifaninanana?
Raha ampitahaina amin'ny tahan'ny outsourcing 80 isan-jato an'ny Southwest Airlines, ny outsource United United dia ny 51 isan-jaton'ny fikojakojana ny fiaramanidina, ny outsource Alaska 49 isan-jato, ny outsource Delta 43 isan-jato, ary ny outsource amerikana dia 33 isan-jato fotsiny.
Spirit sy Allegiant dia mivoaka 20 isan-jato eo ho eo, saingy mety hihena ny isany noho izy ireo manofa ny ankamaroan'ny fiaramanidiny. Ary, izany rehetra izany dia tontosa an-tampon'ny fananana mekanika farany ambany indrindra amin'ny tahan'ny fiaramanidina ao amin'ny indostria. Southwest Airlines dia mitazona 3.3 AMT amin'ny tahan'ny fiaramanidina. UAL, AA, ary DL dia mitazona ny 12.0, 11.2, ary 7.2 AMT amin'ny tahan'ny fiaramanidina. Ny manaraka akaiky kokoa ny SWA dia i Alaska izay mbola mitazona ny tahan'ny 4.3 (noho ny programa Line Mx Only- Mx an'ny Alaska).
Andao izao hiresaka momba ny asa mahay sy tsy mahay. Ny fizarana 56 amin'ny politikan'ny SWA momba ny Airframe Essential Maintenance Providers (AEMP) dia milaza fa,
"Ny fanaraha-maso ankolaka ataon'ny mpiasa fitantanana ny fikojakojana na ny fizahana dia manana Airman Certificate ary, rehefa manendry asa, manara-maso ny asa vitan'ny AMT manam-pahaizana sy / na ny mpanara-maso ny kalitao eo ambany fanaraha-mason'izy ireo mivantana." Manambara ihany koa izy io, "olona tsy misy mari-pahaizana: Tsy maintsy manana traikefa mifandraika amin'ny asa fikojakojana ary manatanteraka ny asa rehetra eo ambany fanaraha-mason'ny tompon'ny Fahazoan-dàlana Airman mety (voatondro ho mpanara-maso aorian'izany). Ny mpanara-maso dia tsy maintsy za-draharaha amin'ny asa tanterahina ary tsy maintsy tendrena ho an'ny tanjona tokana amin'ny fanaraha-maso mivantana, manome torolàlana, fanampiana ary fahaizana amin'ny asa fikojakojana tanterahina. "
Tsara sy tsara daholo izany rehetra izany mandra-pandalinantsika isa kokoa. Araka ny FAA, AAR Aircraft Services any Indianapolis staffs 323 voamarina mekanika mifanohitra amin'ireo 237 tsy voamarina. Serivisy teknikan'ny fiaramanidina any an-tanànan'i Kansas dia 156 no voamarina raha tsy 60 no voamarina. ATS's Everett, Washington pasitera dia manana mekanika 565 voamarina raha 361 tsy voamarina. Ny fehiny dia, amin'ny toeram-pikojakojana fiaramanidina amerikana, ny mekanika voamarina dia antsasaky ny isan'ny mponina mekanika. Ampitahao amin'ireo Aeroman ao El Salvador ireo isa ireo izay misy mekanika 163 voamarina ary 2,231 ireo tsy voamarina. Hong Kong Aero Engine Services dia manana mekanika 48 voamarina ary 714 tsy voamarina. Mekanika kely fotsiny amin'ny toeram-panamboarana vahiny no voamarina, ary raha ny filazan'ny AEMP anay, ity vahoaka kely mekanika voamarina ity dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny asa rehetra ataon'ny mponina marobe amin'ireo mekanika tsy voamarina. Izany rehetra izany dia tsy misy fiarovana ny mpitsikilo, ary SMS, raha misy, dia mety tsy mifanaraka amin'ny mpiara-miasa Etazonia izany.
Raha toa ny fitantanana ka mihevitra ny fikojakojana ny outsourcing ho toy ny singa manakiana ny fahombiazan'ny ho avy, dia tokony hamoaka tahirin-kevitra mampiseho ny taham-pahatokiana fikojakojana ho an'ny mpivarotra tsirairay izy ireo raha oharina amin'ny tahan'ny fahamendrehan'ireo mekanika ananantsika. Ireo taham-pahatokisana ireo dia tokony ahitana hoe ohatrinona ny asa tsy natao tamin'ny voalohany, ary ny habetsaky ny asa tokony haverina raha vao naverina napetraka ny seranam-piaramanidina. Ity tahirin-kevitra ity dia tokony havoaka amin'ny asa taloha sy amin'ny asa any aoriana.
Hitanay tamin'ny tantaran'ny orinasanay ny fijerin'ny myopika amin'ny fanaraha-maso ny fandaniana nefa tsy mijery ny sary lehibe dia hiverina hanaikitra antsika. Ny ohatra miharihary dia ny fanaovana outsourcing fotodrafitrasa IT be dia be. Ireo mpitarika orinasantsika ankehitriny dia mamerina ireo hadisoana ireo ihany tamin'ny fikojakojana ny fiaramanidina anay. Ny tahiry azo avy amin'ny outsourcing misimisy kokoa - eto an-toerana na any ivelany - dia hanakorontana antsika rehetra ary hanasarotra ireo mekanika antsika hiaro antsika hatrany.
Toa mihazona ny fitantanana ny fifandraisan'ny mpiasa any Southwest Airlines momba ny mekanika izay hampiasainay amin'ireo vondrona hafa amin'ny ho avy ny fitantanana anay. Ny toe-javatra misy amin'ny AMFA dia natao ho tifitifitra ho an'ny mpiasa rehetra ao amin'ny Southwest Airlines. Miharihary miharihary fa mandra-pahatongan'ny Messrs Kelly, Van de Ven, McCrady, ary Kuwitzky, izany fomba vaovao izany amin'ny fifandraisan'ny mpiasa ao amin'ny Southwest Airlines dia hitohy hahazo etona ary hamongotra ny sisin-dàlana rehetra momba ireo fotokevitra fototra nahatonga an'io kaompaniam-pitaterana io ho fahombiazana no lasa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia mpitazona lova hafa fotsiny isika. Tena mila mpitarika vaovao isika miaraka amin'ny fangorahan'i Kelleher-esque, fahitana, fanetren-tena ary fitarihana. Mila fitarihana izay mihevitra ny mpiasa ho singa synergistic sy manan-danja amin'ny ekipa mahomby isika fa tsy singa mandany vola fotsiny.
Azavaiko mazava tsara, azo antoka ny fiaramanidintsika, ary ny ampahany lehibe amin'izany dia satria ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny AMFA dia manohy manao ny asany manoloana ny fanerena, ny fampitahorana ary ny fanaraha-maso ataon'ny mpitantana Southwest. Izy ireo dia manana fankasitrahana mandrakizay noho ny asa vita tsara. SWAPA Pilots no fiarovana farany ary tsy hanidina fiaramanidina mihitsy raha tsy hoe azo antoka ny fanaovana izany. Ny fianakavianay sy ny namantsika dia manidina amin'ny fiaramanidinay, ho fanampin'ny mpandeha sarobidy anay. Hiaro azy ireo sy ny besinimaro amin'ny ankapobeny isika ary hanohy hitady fomba hanatsarana ny fiarovana. Miankina aminy ny fiainan'izy ireo, ny hoavin'ny Orinasa ary ny fivelomanay.
A hatramin'ny B soa aman-tsara na tsia mihitsy.